စက်ဘီးကွင်းဆက်များအတွက်အကောင်းဆုံးချောဆီကိုကဘာလဲ? - ချည်နှောင်
အဓိက > ချည်နှောင် > Chain l lube - ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်
Chain l lube - ရေရှည်ဖြေရှင်းချက်
အကောင်းဆုံးစက်ဘီးကွင်းဆက် lubes- ငါတို့ရွေး
ရော့ခ် N ကို Roll ရွှေ။
Silca စူပါလျှို့ဝှက်ချက်ချည်နှောင်Lube ။
အစိမ်းရောင်ဆီစိုစွတ်သော Lube ။
CeramicSpeed ​​UFO ကြွေထည်ချောဆီ။
အရည်ပျော် Speedwax ။ ဖယောင်းချည်နှောင်အပိုအလုပ်အနည်းငယ်ယူ, ဒါပေမယ့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကျိုးနပ်ကြသည်။
Lube ရေနံ၊ သစ္စာစောင့်သိသောသူငယ်ချင်းနှင့် ပို၍ တိကျစွာအော်တိုကတ်အားကစားသမားတစ် ဦး ၏သစ္စာစောင့်သိသောသူငယ်ချင်း။ အကယ်၍ ၎င်းမရှိလျှင်စက်ဘီးပေါ်မှစက်ဘီးစီးနေသောကီလိုမီတာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မောင်းနှင်မှုကွင်းဆက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အဲဒါကိုယုံချင်မှယုံမယ်၊ ငါတို့ချည်နှောင်ခြင်းကိုချောဆီနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဂီယာပြောင်းရန်ရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွင်းဆက်နှင့်စက်ဘီးအစိတ်အပိုင်းများ၏သက်တမ်းကိုတိုးစေလိုသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်ပိုမိုထိရောက်မှုရှိလိုသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုစနစ်တကျချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ခြင်းဖြင့်သိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးအမြတ်အချို့ရရှိနိုင်သည်။ ဒီတော့ဒီနေ့ငါဘယ်စက်ဘီးစက်ချောဆီကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးသင့်တယ်၊ (သိသိသာသာတေးဂီတ) (ပေါ့ပါးသောဂီတ) ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်သူတို့၏ချောဆီကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုး ခွဲ၍ စိုစွတ်သောနှင့်ခြောက်သွေ့သောချောဆီကိုအုပ်စုဖွဲ့သည်။
နှင့်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, သင်မှန်သည်။ ချောဆီကိုဒီအမျိုးအစားနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ရှိပါတယ်။ အခုတော့ခြောက်သွေ့တဲ့ဒြပ်စင်ချောဆီ၏ချောဆီပစ္စည်းဥစ္စာကိုရည်ညွှန်းသည်။
၎င်းသည်သင်ကားမောင်းနေစဉ်သင့်ကွင်းဆက်တွင်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအများစုမှာဖယောင်းအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ ယခုဤခြောက်သွေ့သောချောဆီကိုမင်းတို့၏ကွင်းဆက်တွင်အရည်အဖြစ်အသုံးချပြီးနာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်ခြောက်သွေ့စေသည်။ ဒါကြောင့်မင်းမစီးခင်သတိရပါ။
ခြောက်သွေ့သောချောဆီနှင့်ပတ်သက်သည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာမှာ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုသည့်အခါဖုန်များ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်အပျက်အစီးများကိုမဆွဲဆောင်နိုင်သဖြင့်နွေရာသီခြောက်သွေ့သောကာလတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်အားနည်းချက်မှာ၊ ၎င်းကိုပုံမှန်မျှတစွာအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်စိုစွတ်သောနေ့၌သင်စီးနင်းခဲ့ပါက (သို့) ရှည်လျားသောစီးနင်းမှုအတွက်ကုန်းနှီးပေါ်၌ရောက်နေပြီးခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုစက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့်ခြောက်သွေ့။ တုန်လှုပ်နေသောသံကြိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကိုမည်သူမျှမနှစ်သက်ပါ။
စိုစွတ်သောချောဆီကိုမူလရွေးချယ်မှုချောဆီကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အများစုဟာကားအင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ပိုတူတယ်ဆိုတာကိုသုံးတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ရေကိုဖယ်ရှားရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောရိုးရိုးရေမှုန်ရေမွှားများထက်ပိုကောင်းသည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၎င်းသည်ပိုမိုကြာရှည်ခံပြီးကြာရှည်ခံသည်။ ထိုအရည်အသွေးသည်မျက်မှောက်ခေတ်စိုစွတ်သောချောဆီများနှင့်ယနေ့တိုင်အောင်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ကွင်းဆက်တွင်စိုစွတ်သောချောဆီများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်ချောဆီများအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဤပုံစံတွင်ကွင်းဆက်တွင်ရှိနေပြီးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်အနည်းငယ်ပိုထူသည်။ အမှန်တကယ်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်စိုစွတ်သောအခြေအနေများအတွက် ပိုမို၍ ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်မိုးရေခံနိုင်မှုနှင့်ကွင်းဆက်ပေါ်တွင်ရှိနေသောအခါသူတို့ဆေးကြောရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါစိုစွတ်သောချောဆီနှင့်ဆက်စပ်သောအားနည်းချက်မှာကွင်းဆက်သို့အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချည်ထည်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခြောက်သွေ့သောချောဆီကိုထက်အနည်းငယ်ပိုမကြာခဏသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ အကယ်၍ သင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါကကြွေအခြေခံသို့မဟုတ်ဖယောင်းအခြေခံသည့်ချောဆီကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ကွင်းဆက်။ ယခု၎င်းတို့သည်ခြောက်သွေ့သောစိုစွတ်သောဗားရှင်းများအကြားတစ်နေရာရာတွင်ထိုင်ကြသော်လည်းဗားရှင်းနှစ်ခုစလုံးကဲ့သို့ပင်၎င်းတို့သည်ကွင်းဆက်တွင်အရည်ပုံစံဖြင့်အသုံးပြုသော်လည်းအနည်းငယ်စေးကပ်သောခြောက်သွေ့စေသည်။ ဤရွေ့ကား heavy-duty ချောဆီကိုသင်၏ကွင်းဆက်နှင့်အခြားရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများအကြားပွတ်တိုက်မှုနှင့်ဆွဲလျှော့ချသင့်ရဲ့ drive ကိုကွင်းဆက်လျှော့ချကူညီပေးသည်။
ဒါ့အပြင်သူတို့ကမင်းကိုသင်ရှာဖွေနေတဲ့စွမ်းအားနည်းနည်းရဖို့သာကူညီလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအနည်းငယ်ပိုဈေးကြီးတယ်ဆိုတာသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏအဖြစ်မကြာခဏလျှောက်ထားခံရဖို့ရှိပါတယ်။ Teflonor ကဲ့သို့သော silicone အခြေခံမှုန်ရေမွှားတစ်ခုနှင့်အတူအရာဝတ္ထုများကိုကောင်းမွန်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါကွင်းဆက်ရှေ့ရှိကွင်းသို့မဟုတ်နောက်ကျောကက်ဆက်ထိနိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းအထူးပြောနေတာပါ။ ပြီးတော့စက်ဘီးကိုစကင်ဖတ်ဖို့နဲ့သင်နည်းနည်းလောက်လျှော့ချနိုင်မယ့်တခြားနေရာတွေရှာဖို့လည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုပါ။ ဥပမာအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုမသုံးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Ailleurs ၏ရှေ့ကျောရိုးရှိရေစီးကြောင်းများနှင့်ဘရိတ်နှင့်ပြောင်းရွေ့ရန်ကေဘယ်လ်များကဲ့သို့သောအရာများဖြစ်သည်။
မည်သည့်ချောဆီကိုသင်ရွေးချယ်ပါစေ၊ ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းသောကွင်းဆက်သို့လျှောက်သောအခါအမြဲတမ်းပိုကောင်းလာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မောင်းနှင်မှုကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကိုအဝတ်စုတ်သို့မဟုတ်သုတ်ပုဝါနှင့်သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်တိုင်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အလားတူအရာတစ်ခုဖြင့်ပွတ်တိုက်ရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ တနင်္ဂနွေခရီးကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ ကလပ်များနှင့်အတူလုပ်ပါဟုဆပ်ပြာပြီးနောက်ဆပ်ပြာနှင့်ရေပူဖြင့်အမှန်တကယ်နက်ရှိုင်းစွာသန့်ရှင်းစွာကြိုးစားရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးကချောဆီကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စီးနင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မည့်အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သင်ဤစီးနင်းပေါ်တွင်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်အခြေအနေများ။ သင့်စက်ဘီးကိုမည်သို့ကောင်းစွာချောဆီချည်နှောင်ရန်အခြားအကြံပေးချက်များရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
ငါတို့ဒီဟာကိုရချင်ကြတယ် Plus အား, မျှော်လင့်သင်ဆောင်းပါးပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ Like ကိုနှိပ်ပါ။
အခုငါ Triathlon ဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါရေးတဲ့ဆောင်းပါးကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။ သင်၏စက်ဘီးကိုထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မာ့ခ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်ဆောင်းပါးကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
WD40 ကို lube အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
မင်းဘယ်တော့မှမကွင်းဆက်အဖြစ် WD40 ကိုအသုံးပြုပါကတည်းကချောဆီWD-40၎င်းသည်မူလတန်းကတည်းကအမှန်တကယ်ချောဆီကိုမဟုတ်ပါအသုံးပြုသည်တစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်သံချေးပျော်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
သငျသညျကွင်းဆက် lube ဘယ်လောက်မကြာခဏသငျ့သလော
စက်ဘီးအထိန်းကသန့်ရှင်းရေးနှင့်အကြံပြုသည်ချောသင့်ဆိုင်ကယ်ရဲ့မောင်းနှင်မှုကွင်းဆက်အနည်းဆုံးတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အကာအကွယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ Theကွင်းဆက်နှင့် drivetrain ပုံမှန်အားဖြင့်သင်၏စက်ဘီး၏ညစ်ညမ်းသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒီဖုန်ဆိုင်ကယ်အသက်ရှည်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်သတင်းဆိုးဖြစ်ပါတယ်။
အိုးဟုတ်တယ်၊ ဒါကစီးပွားရေးအချိန်လို့ဆိုလိုတယ်၊ ဒါကထူးဆန်းလိမ့်မယ်။ အိုကေ၊ ကျွန်တော်တို့ Andrew Reitsma ဆီမှချောဆီနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုပထမဆုံးရခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူက '' Hello Under Down from '' လို့ပြောတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါထင်တာကတော့အရာတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားလို့ရမယ် ကီလိုမီတာရာနဲ့ချီတဲ့ဘ ၀ ကိုမင်းရဲ့ကွင်းဆက်ထဲကနေထုတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားတာဟာမကျော်လွှားနိုင်လောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တိကျတဲ့လုပ်မယ့်နှင့် don'ts ရှိပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ငါကခြောက်သွေ့ပြီးဆူညံလာတဲ့အခါသင့်ရဲ့ကွင်းဆက်ကိုပြန်လည်ချောချောမွေ့မွေ့ပြောလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ပြီးတော့, အညစ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ငါကွင်းဆက်များအကြားလင့်များအတွက် Chain တူသောငါကြည့်လိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာကွင်းဆက်ဟာဟောင်းနွမ်းသွားတယ်၊ ပြီးတော့ဖုန်တွေ၊ သဲတွေအပြည့်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အခါမှာအသစ်တစ်ခုလိုထွန်းလင်းတဲ့အထိသန့်ရှင်းရေးလုပ်ချင်တယ်။
သင်အသုံးပြုသော degreaser အမျိုးအစားကိုအမှန်တကယ်ပွန်းပဲ့စေသော၊ အက်ဆစ်သို့မဟုတ်အယ်ကာလိုင်းပျော်ရည်များကိုမသုံးပါနှင့်။ (က) သင်၏ကွင်းဆက်၏သက်တမ်းသည်အလွန်မကောင်းပါ။ ထုတ်လုပ်သူအများစုကသင်ကျောခိုင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုပြောလိမ့်မည် သို့သော်ပုံမှန်စက်ဘီးနှင့်ဆိုင်သောဓာတ်ခွဲခန်းသည်၎င်း၏အလုပ်ကိုမကြာခဏကောင်းကောင်းလုပ်လိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကားမောင်းတဲ့နေ့ရဲ့အဆုံးမှာငါခြောက်သွေ့တဲ့အခြေအနေမှာငါမောင်းတဲ့နေရာနဲ့မတူနိုင်လို့ပါ။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲအတိအကျကိုမပေးရဘူးဆိုတာမင်းသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်အပိုင်းမှာအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီတော့နောက်တစ်
ဒီဟာကို TomKrouze မှရတယ် Cool အမည်, တွမ်။ “ တကယ်တော့တောင့်တင်းခိုင်မာမှုရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ။ ဘယ်အချိန်မှာငါတောင့်တင်းတဲ့စက်ဘီးလိုတာလဲ။ တကယ်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပဲ။
လူများကယေဘုယျအားဖြင့်ခိုင်မာသောစက်ဘီးသည် power ဂီယာအတွက်အရေးကြီးသည်ဟုယူဆကြသောကြောင့်သင်က cranks ကိုတွန်းထုတ်ပြီးစက်ဘီးကိုမရွှေ့နိုင်သဖြင့်ပါဝါအားလုံးသည်နောက်ဘီးသို့သွားသည်။ သို့သော်ဤအချက်သည်အရေးကြီးသောအချက်ကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဤစနစ်တွင်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိပါ။ သိသာထင်ရှားသည့်စွမ်းအင်ကိုမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ၊
ဒါကြောင့်သီအိုရီအရ၊ မင်းရဲ့စက်ဘီးကိုဖိလိုက်ရင်ဒါကမင်းကိုအဲဒီစွမ်းအင်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ဒါကငါထင်တဲ့အချက်တစ်ချက်။ သို့သော်ခိုင်မာတောင့်တင်းသောစက်ဘီးသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါခိုင်မာသောစက်ဘီးကိုကိုင်တွယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တကယ်တော့လမ်းပေးထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့စက်ဘီးကိုရှေ့မှောက်မှာခိုင်မာတဲ့ရှေ့ဆုံးကစက်ဘီးကိုထောင့်ကနေကြည့်ရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်အရေးမပါဘူး
သင်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်အလွန်မြန်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ နောက်တွင် Haziq Annies ရှိသည်။ 'အောက်ခြေ bracket ကလဲလှယ်လို့ရလား' ၂၄ မီလီယံလက်ကိုင်အကန့်သည် adapters စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူ BB30 တစ်ခုအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ပါသလား။ ဟုတ်တယ်။ ငါတကယ်ထင်ထားတာဒီမှာမင်းရှိတယ်။
လာစမ်းပါ။ ဒီတော့ FSA သေးငယ်တဲ့ adapters ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒီတော့ဒီတစ်ခုသည် BB386EVO အောက်ခြေကွင်းပြင်မှထွက်သွားပြီး၎င်းသည်ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့် Srams GXP အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ထင်သည် ၂၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံဖြစ်သည်။ (၂၂ မီလီမီတာနှင့် ၂၄ မီလီမီတာနှင့် ၂၄ မီလီမီတာ) အွန်လိုင်းကိုကြည့်ပါ။ adapters များရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် crank type အားလုံးအတွက်အောက်ခြေ brackets များအားလုံးအဆင်သင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ကျိန်းသေတစ်ခုခုလုပ်နိုင်ပါတယ် အိုကေ။ ဒါနောက်ပက်ထရစ်ဂျိုးဇက်ကရတယ်။ 'စက်ဘီးဆိုင်တိုင်းနီးပါးက' မင်းရဲ့စက်ဘီးအသစ်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာပြန်ယူပြီးမင်းရဲ့စက်ဘီးအသစ်ကိုယူလာပါ 'လို့ပြောတယ်၊ ဒါကမင်းကပစ္စည်းတွေကိုပိုရောင်းဖို့ဆင်ခြေတစ်ခုပဲလား။ ' မဟုတ်ပါ၊
ကေဘယ်ကြိုးတွေကသူတို့ဆန့်တယ်ဆိုပါစို့၊ ကြိုးတွေလည်းမဆန့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီအမှုအရာတွေနဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေဟာအောက်ဘက်ကိုချုံ့နိုင်ပြီးဒါကသင့်ရဲ့ဂီယာတွေကိုနည်းနည်းလေးတော့အိမ်မှာလုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစိတ်ပျက်စေနိုင်တယ်။ ကျနော်တို့အကြောင်းအရာအပေါ်ကြီးစွာသောဆောင်းပါးရှိသည်။ တကယ်တော့ငါတို့ကဂီယာကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကနည်းနည်းလေး cogin ကိုလှည့်နေတယ်။
ဘယ်နေရာမှာလဲ၊ ပြီးတော့ဘယ်မှာသူတို့မကောင်းဘူးလဲ။ ဒါက indexing လုပ်တာပါ၊ အဲဒါကိုပြင်ဖို့နဲ့ derailleur ကိုနေရာတကျရွှေ့ပေးဖို့ပါ။ ၎င်းကိုအလွယ်တကူညှိနိုင်သည်။
အိုကေ, ငါတို့ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က youtube ဆောင်းပါး, leecbracing မှ, ဒါမှမဟုတ် lee cb ပြိုင်ကားအောက်မှာနောက်ထပ်တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်၊ ဘယ်လဲဆိုတာသေချာမသိဘူး မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသူတို့က 'ပညာရှင်များသည်အဘယ်ကြောင့်ရှေ့တန်းတွင်ထိုင်နေကြသနည်း' ဟုမေးခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ဒါဟာသင်ဟာရန်လိုမယ့်လမ်းတွေပေါ်မှာလမ်းအလွန်မြန်မယ်ဆိုရင်အရမ်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလိုချင်လို့ပါ။ ပြီးတော့သင်အမှန်တကယ်နက်ရှိုင်းလာတဲ့အခါသင်၏တင်ပါးကရှေ့ကိုလှည့်ပတ်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သက်တောင့်သက်သာနဲ့ခွန်အားတွေရဖို့အတွက်ဆိုလိုတာကခင်ဗျားနောက်ထပ်ရှေ့ကိုနောက်ကိုရွေ့ချင်တာပါ။
တကယ်တော့ဒါဟာအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်လွန်စွာဆိုးရွားသည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိနေပြီး၎င်းသည်နောက်ကျော burner တွင်ထားသောစာပိုဒ်တိုများရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်တို့အတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကုန်းနှီးများကိုဆွဲတင်ပြီးထိုင်ခုံပေါ်ရှိလူများရှေ့သို့ရွေ့လျားကာရှေ့တွင် rivet ၌ထိုင်နေသောအချိန်ကာလမှလာသည် ကုန်းနှီးများရှေ့သို့ဆက်လက်သွားရန်နှင့်အောက်သို့ကျရောက်စေရန်အတွက်ရှေ့တွင်ပိုမိုရှည်လျားသည်။
Matt မှာဒူဘိုင်း၏နောက်ဆုံးခရီးစဉ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောတကယ့်ကိုအလွန်ကောင်းသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ ဒုတိယအကြိမ်တွင်ကစားသည်။ ပိုမိုလေ့လာသင့်သည်။ ကောင်းကျိုးများသည်သူတို့၏ရန်လိုနေသောမြင်းစီးသည့်အနေအထားကြောင့်လူသိများသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အစွန်းရောက်မှုများတိုးပွားလာသည်။ ။ (soft music) ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ မင်းဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊ ငါ့စက်ဘီးကတော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်။ ဆိုလိုတာကငါဟာငါ့ပြိုင်ပွဲမှာလိုပါပဲ handlebar နဲ့ကုန်းနှီးအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုငါပြိုင်ပွဲက Johann van Zyl ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရန်လိုမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ် ငါဆိုသည်ကား၊ ယခုငါတို့ကားမောင်းသူအနည်းငယ်နှင့်စကားပြောပြီးပြီ၊ ဘာကြောင့်သူတို့ကအစွန်းရောက်အရာများကိုယူဆောင်နေပုံရသည်။ - ကောင်းပြီ, ထို့နောက်အမြန်မေးခွန်းနှင့်အဖြေ session ကိုယခု။
ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံး၏အနှေးဆုံးအပိုင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း Rapid Fire Q&A တွင် 'Speed ​​Speed ​​Definition It အရေးမကြီး' ဟုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ 'ဒါဆိုနေသန်၊ မေးခွန်းနံပါတ် ၁၊
ဟုတ်တယ်၊ သူ့နောက်ဘီးမှာပြaနာရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသူသည်ခြေနင်း။ ရှေ့သို့သွားရန်အဆင်ပြေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာနင်းလက်နက်ကလည်နေပြီးဘာမှဖြစ်မလာဘူး၊ ဘာမှားလဲ ကောင်းပြီ၊ ဒါကမင်းရဲ့နောက်ဘီးကတကယ်အိုမင်းလာပြီ၊ ဒါက freewheel ဖြစ်တာနဲ့သင့်ကိုခြေထောက်မလှုပ်နိုင်အောင်နင်းပြီးနင်းတာကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
အခြေခံအားဖြင့်သူတို့ဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ gunkand နဲ့ယေဘုယျ crap နဲ့အနည်းငယ်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် springing ကိုအခြေခံအားဖြင့်သင်အားအခြေခံအားဖြင့်စမ်းတာကိုရပ်တန့်စေနိုင်တာပါ။ အခွင့်အလမ်းတွေကမင်းတို့အဲဒါကိုပြင်လို့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ဟာထုတ်လုပ်သူရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုညွှန်ကြားချက်တွေတကယ်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ freewheel ကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်အွန်လိုင်းမှာအရင်ဆုံးသေချာစွာစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ GCN-Bike ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ freewheel စက်ဘီးအများစုဟာပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းဒါဖြစ်မယ်သေချာတယ် ကောင်းပြီ၊ ငါတို့မှာ oreosaysb00 တစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါကထူးဆန်းတဲ့နာမည်ပဲ။ 28c တာယာတစ်ဘီးလျှင် ၂ ခုမှ ၃ ဝပ်အထိသိမ်းဆည်းသည့်အခါကျွမ်းကျင်သူများသည် 25c တာယာများဖြင့်ဘာကြောင့်စီးကြတာလဲ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကောင်းစွာကောင်းစွာဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
Lennart Meinke က 'ဒါကနည်းနည်းလေးပဲ။ အစဉ်အလာတွေအများကြီးပဲ' ဟုပြောခဲ့သည် ပြီးတော့ငါပြောမယ်၊ ဒါကအမှန်တရားနဲ့သိပ်မဝေးဘူး Pro Peloton ကိုအမှန်တကယ်ထိုးဖောက်ရန်သိပ္ပံနည်းကျအတွေးအခေါ်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြာသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာတစ်ခုခုဘယ်လိုခံစားရလဲ၊ လူတွေထင်တာကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ထို့အပြင်အချက်အလက်ပေါင်းများစွာကပြောလျှင်ပင် ၂၈ နှစ်သည် ၂၅ နှစ်ထက် ပို၍ နှေးသည်ဟုယုံကြည်သူအများစုကယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် 28s သည် 25s ထက်အနည်းငယ်ပိုလေးပြီး aerodynamic နည်းသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့လေကိုဖြတ်ပြီးမျက်နှာပြင်ပိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကတော့အကောင်းအဆိုး ၂၈ ခုထက်ပိုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ဘီးတွေပိုပြီးကျယ်လာတာနဲ့အမျှပေါ့။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီလေခွင်းအားနည်းချက်များအချို့ကိုထေမိ။
ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာ Amaury မှသူအမြန်စီးရန် Canyon Aeroad အသစ်ကိုရပြီဟုပြောပြီးလျှင်မြန်သည်။ အမြန်ဖြစ်ပါက၊ တာယာအရွယ်အစား၊ ၂၅၊ ၂၈ မီလီ၊ Continental GP 4000sII အတွက်သင်အဘယ်အကြံပြုသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေအရ ၂၈ နှစ်ဟာအရမ်းကိုသက်တောင့်သက်သာရှိလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာမင်းကစက်ဘီးစီးတာကို ၅၀ psi လောက်စီးနင်းလိုက်ပါကမင်းရဲ့စက်ဘီးကမှော်အရုပ်လိုလှိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အလွန်ချောမွေ့သောကတ္တရာပေါ်၌မောင်းနှင်နေပြီးလေယာဉ်အင်ဂျင်များသည်အရာအားလုံးဖြစ်ပြီးသင်၏ပျမ်းမျှအမြန်နှုန်းသည်မြင့်မားပါကသင် 25c သို့သွားလိုသော်လည်း၊ 28con နှင့်ကျိန်းသေသွားမည်မှာသေချာသည်။ အိုကေဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မေးခွန်းများစွာရှိနေပြီး ၄ င်းတို့အားလုံးသည်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Dan Fish သည်သူ၏ကော်လာရိုးကိုချိုးလိုက်ပြီးသက်သာရာရစေရန်အချိန်ရှိနေစဉ်သူ၌ရှိသည့်ကျန်းမာမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် Turbo Trainer ကိုသူမည်သို့သုံးနိုင်သည်ကိုသိလိုသည်။ ဒီတော့တာဘိုသင်တန်းဆရာနဲ့ကျိန်းသေပြီးမင်းအဲဒီမှာကြာကြာနေစရာမလိုတော့ဘူး။ GCN မော်ကွန်းတိုက်, လေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများစစ်ဆေးပါ။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိနစ် ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀ မိနစ်တစ်ခုမှတစ်ခုလုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပထမနေရာ၌ထိုင်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသော်လည်းသင့်တော်သောနေရန်သင်အနည်းငယ်သာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်မှာအံ့သြစရာဖြစ်သည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေစတီဖင်ကမ်မင့်သည် Basque National of Tour တွင်ကျရောက်ပြီးနောက်ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့်အသက်မပြည့်သေးသောကြောင့်ဗြိတိန်အမျိုးသားအမျိုးသားပြိုင်ပွဲ Champs နှင့်ဗြိတိသျှအမျိုးသား Time Trial Champs များအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ပြီးတော့သူဟာ Zwift ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တာအားလုံးနီးပါးဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့နိုင်ငံသားတွေအထိပါပဲ။ လေးနာရီပေါင်းမှာတော်တော်လေး punchy စီးအပါအဝင်။ ဒါကြောင့်သင်သို့မဟုတ်သင့်တွင် smart trainer ဖြင့်ထိုရွေးချယ်စရာမရှိပါကသင်လိုအပ်သမျှသည်အာရုံခံကိရိယာနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Zwift သည်ယခုအချိန်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများစွာလုပ်သကဲ့သို့ကျိုးပဲ့သောကျောရိုးရှိသတ္တဝါနှင့်သင်၏အဖြေဖြစ်နိုင်သည်။
Sanresh Shedekar မှပေးပို့သောနောက်မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာချိတ်ဆက်ပါ။ သူကလမ်းပေါ်ရှိသူ၏ FTP သည် ၂၄၅ ဝပ်ရှိပြီး Zwift တွင်သူ၏ FTP သည် ၂၀၅ ဝပ်သို့ကျသွားသည်။ သူသည်အလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရသည်။ သင့်အနေဖြင့်သင်၏ FTP သည်ယေဘုယျအားဖြင့်နည်းနည်းနိမ့်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ကြီးမားသောအရာများအနက်တစ်ခုမှာအမှန်တကယ်အပူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်အလွန်ပူပြင်းခြင်းနှင့်အအေးမိအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိဘဲတကယ့်ကောင်းသောအပင်နှင့်ပင်လျှင် wind Fans များရှေ့တွင်၊ သင်၏ FTP သည်အနည်းငယ်နစ်သွားသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ပဲ လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားပြီးလေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်တူညီသောဝန်းကျင်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားနေသမျှကာလပတ်လုံးဤအရာသည်ကူညီလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်သင်ကအမြဲတမ်းအပြင်မှာဖြစ်စေ၊ အတွင်းမှာဖြစ်စေအမြဲတမ်းစမ်းသပ်တယ်ဆိုရင်၊ ဒါကအမြဲတမ်း ၃၅ watts အောက်မှာရှိရင်ပြaနာမဟုတ်ဘူး။ ပူတာကြောင့်ခင်ဗျားသိတာကဒါကိုထားလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးဆက်စပ်မေးခွန်း, သင်သည်ဤအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်သနည်း အိုကေ, ခ
Ryder က 'ငါတို့အားလုံးဟာအမြင့်လေ့ကျင့်မှုအကြောင်းကြားဖူးတယ်၊ အပူလေ့ကျင့်မှုလိုမျိုးအဲဒီလိုမျိုးရှိသလား' လို့ပြောတယ်။ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်၊ အပူရှိန်ပိုရရန်သင်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာအေးပြီးစိုစွတ်တဲ့ကျေးလက်မှာနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့လှပပြီးပူပြင်းတဲ့၊ နေသာတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအတွက်လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်၊ ဒါကနင့်ကိုနွေးအောင်နွေးထွေးဖို့တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။
မင်းလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး ဒါနဲ့ငါပြေးနေစဉ်တာဘိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ပြောတယ်၊ မပြင်းထန်ဘူး၊ မောင်းရုံပဲ၊ ဒါပေမယ့်အရမ်းပူပြင်းပြီးစိုစွတ်တဲ့အခန်းမှာ။ ဒီတစ်ခါလည်းသင့်ရဲ့ရေချိုးခန်း။
ငါ Matt သည်သူ၏ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာတခါလုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့သင်တစ် ဦး ချွေးထွက်အလုပ်လုပ်နေသမျှ, သင်မသွားခင်တစ်ရက်ငါးရက်, တစ်နာရီတစ်နာရီလုပ်ပါ, ဤသည်ကိုသင်အပူမှ acclimate သင့်ပါတယ်။ ဒီတော့အပူသင်တန်း။
မှန်ကန်သော ထို့နောက် Quickfire အတွက်မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သနည်း။ ဖြစ်ကောင်းမမြန်, ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်မေးခွန်းများကိုအဆင်ပြေဖြေကြားခဲ့ကြလိမ့်မည်, ငါထင်ပါတယ်သောအချက်သည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းအမည်ပြောင်း, ကွဲပြားခြားနားသောမခေါ်နိုင်ဘူး။
Gabriel Blanchfield ကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ crank fromရိယာမှထူးဆန်းသော creak ရှိပါတယ်။ မြင်နိုင်သောပျက်စီးမှုမရှိပါ၊ စက်ဘီးကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပြီး၎င်းသည်ကြီးမားသောလက်စွပ်တွင်ရှိသည့်အခါမှသာဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
နင့်ကိုငါစာနာမိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ creaky wheels ကိုရှာဖွေတာကစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ အဆင်ပြေစွာ, Lasty ရဲ့စက်ဘီးငါ့ကိုဘေးမှာညာဘက်ဆွဲထားသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကလက်စွပ်ကြီးထဲရောက်နေပြီဆိုရင်တွန့်သွားရင်ဒါကစက်ဘီးကိုဖြတ်ပြီး torque ပိုသွင်းလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒါကမင်းရဲ့ကွင်းဆက်သော့တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါသူတို့ကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးပါမယ်။ သူတို့ကတုန်ခါနေတဲ့အသံကိုမလုပ်တတ်ကြပေမဲ့သူတို့လိုပဲကလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့အသံမျိုးကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အောက်ခြေကွင်းခတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ဤလမ်းကြောင်းကိုဆင်းသွားနှင့်လမ်းကိုဖြတ်ပြီးအပေါင်းတို့သည်လမ်းကိုဖြတ်ပြီးမီ, သင်အမှန်တကယ်သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်တော်ရှိသည်ဆောင်းပါးကြည့်ရှုရန်အကြံပြုလိမ့်မယ်။
ကွဲပြားခြားနားတဲ့ permutation အများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ထို့နောက်ဤဆောင်းပါးအပေါ်နောက်ထပ်လေးခုလုပ်ဖို့ခဲ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါဖြစ်ပျက်သော creak ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကငါ့ cranksets ကနေလာခဲ့တာသေချာခဲ့ပါတယ်နှင့်ငါကုန်းနှီးကိုချွတ်တယ်အခါတိုင်းကငါ့အရှေ့အမြန်လွှတ်ပေးရန်ခဲ့သည်ထွက်လှည့်။
ငါမင်းကိုနောက်တာမဟုတ်ဘူး။ သွားကြစို့ အသုံးပြုရန်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူအောက်ခြေ bracket ကထက်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ဆောင်းပါးယခုကစား, ထွက်စစ်ဆေးသည်။
ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးစက်ဘီးစီးခြင်းသည်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ကျိန်စာမှမည်သည့်စက်ဘီးမှမလွတ်ကင်းပါစေ။ ယခုသင်၏စီးနင်းမှုကိုဖျက်ဆီးသည့်အပြင်၎င်းသည် ပို၍ လေးနက်သောအရာတစ်ခု၏နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ကာဗွန်ပျက်စီးသွားပြီးကျဆုံးသွားလျှင်၎င်းသည်ကြီးမားသောတွားသွားမှုကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဆူညံသံကိုသင်အမှန်တကယ်ခံနိုင်ရည်ရှိရင်တောင်မှဆူညံသံကိုအာရုံစိုက်ရန်အမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျပန်းစက်ဘီးခရီးစဉ်သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပြပွဲအောက်တွင်အမှန်တကယ်ကောင်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခဲ့တယ်။ သင့်ရဲ့လက်ကိုင်တွေကိုထိန်းညှိဖို့အကောင်းဆုံးအနေအထား (သို့) ထောင့်ကဘာလဲ။ အနည်းငယ်ရှို - နှင့်အောက်သို့ထောကျနေသောအချို့။
ကောင်းပြီ၊ အများကြီးကသင်၏လက်ကိုင်ဘောင်ပုံစံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မိုင်းဆက်ဆက်ရှိတယ်။
ဤတွင် Lasty ၏စက်ဘီးတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောလက်ကိုင်နှင့်ပင်စည်တစ်ခုရှိသည်။ ဒါကြောင့်သူမှာရွေးချယ်စရာတကယ်မရှိဘူး၊ Trek ကဒီဟာကအကောင်းဆုံးထောင့်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမင်းသိမြင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ငါလည်းလုပ်လိမ့်မယ်
သင်စစ်ဆေးချင်သောအရာနှစ်ခု ပထမ ဦး စွာသင်၏ဘရိတ်အဖုံးဘေးတွင်ရှိသည့်လက်ကိုင်ဘား၏ထောင့်။ ဒါကြောင့်သင်ကကြိုက်နှစ်သက်သလားဒါမှမဟုတ်ချောချောမွေ့မွေ့ကူးပြောင်းခြင်းကိုကြိုက်လား? ယခုအခါလူအများစုကချောချောမွေ့မွေ့ကူးပြောင်းသည့်အကူးအပြောင်းကိုကျင့်သုံးကြသည်။
အခြားအရာ, သင်အငြိမ့်ပေါက်ကိုင်နိုင်ပါသလဲ? မင်းရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာအဆင်ပြေတဲ့ထောင့်ရှိရမယ်ဆိုတာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်များကိုအလွန်အကျွံမလိုချင်ခြင်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမသက်မသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုကိုအပေါ်သို့တက်ဆင်း, ဒါကြင်နာ၏တူ။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်များကိုကြားနေအနေအထားရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်ကိုင်ဘားများမှသင်၏ဘရိတ်တံခါးသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်အဆင်ပြေစေရန်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်သတင်းအချက်အလက်အချို့ပေးမည်ဟုမျှော်လင့်သည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ မင်းကိုစမ်းကြည့်မယ်
ပထမဆုံးတင်ပြရမည့်အချက်မှာလက်ကိုင်ဘားအကျယ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ များသောအားဖြင့်လမ်းရိုးများသည်အများအားဖြင့် ၃၈ မှ ၄၆ လက်မအထိရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏အမြင့်ကိုအခြေခံပြီးသင်၏လက်ကိုင်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
အမြင့်သည်၎င်းနှင့်အမှန်တကယ်မပတ်သက်ပါက၎င်းသည်သင်၏ပခုံးအကျယ်ဖြစ်သည်။ လက်ကိုင်ဘားများသည်သင်၏ AC အဆစ်များအကြားအကွာအဝေးနှင့်တူညီသည်။ သူများသည်သင်၏ပခုံးပေါ်ရှိကျောက်ဆူး bits များဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်မင်းရဲ့လက်ကိုင်တွေကိုရေထဲမှာချထားလိုက်ရင်သင်၏ခြေဆစ်ကပခုံးလောက်ပဲရှိတယ်။ မင်းရဲ့မေးခွန်းကိုငါဖြေပြီ ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါဒီတစ်ပတ်မှာသင့်မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ပတ်ပတ်လည်မှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်းကိုပြန်ထားပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းအသစ်သို့မဟုတ်ပြသမှုအသစ်ရှိပါကသင်၏မေးခွန်းများကိုအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်း (သို့) TorqueBack ရှိလူမှုမီဒီယာတွင်တင်ပါ။ ယခုဤဆောင်းပါးမထွက်ခွာမီ GCN တွင်စာရင်းသွင်းရန်သေချာပါစေ။ လွယ်ကူသည်၊ ကမ္ဘာလုံးကိုနှိပ်ပါ၊ သင်ပိုမိုသောအကြောင်းအရာများကိုယခုလိုချင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Tour de France preview ပြရန်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးကိုသင်ကြည့်သောအခါမနက်ဖြန် (သို့) ပင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဆိုပါကသင့်ကိုယ်သင်မွမ်းမံပါ။
ပြီးတော့ဒန်နှင့်မက်ဂန္ထဝင်အတွက်သင်၏ရေပုလင်းထဲမှသောက်ရန်နည်းလမ်းကိုးခု။ တစ် ဦး ထက်ပိုသောအဘယ်သူသည်ထင်ကြလိမ့်မည်နည်း ရုံအဲဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
Chain Wax သည် lube ထက်ပိုကောင်းသလား။
သင်ဆိုင်ကယ်ကိုချက်ချင်းပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ချောဆီကကွင်းဆက်,ထို့နောက်မင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပိုကောင်းအသုံးပြုခြင်းပိတ်ကွင်းဆက် lube။ အကယ်၍ မင်းရဲ့စက်ဘီးကိုညစ်ပတ်ပြီးဖုန်ထူတဲ့နေရာတွေမှာစီးမယ်ဆိုရင်၊ထို့နောက်သင်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြု။ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်ကွင်းဆက်ဖယောင်း၎င်းသည်ဖုန်၊ အညစ်အကြေး၊ ရေစသည်တို့ကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များကိုဖယ်ရှားရာ၌အတော်လေးထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
ကြီးထွားလာသောချည်နှောင်ခြင်းခေါင်းစဉ်မှာအချိန်အကြာကြီးရှိနေခဲ့ပြီးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက်တောင်းဆိုမှုများစွာရှိခဲ့သဖြင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုတိုးတက်အောင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင့်အားမျှဝေမည်ဖြစ်သည်။ ငါအချို့အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုသင့်သည်ကိုသင်အချို့ကစဉ်းစားနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကွင်းဆက်ကြီးထွားလာခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုဘာကောင်းစေသနည်း။ ကောင်းပြီ, Friction Facts နှင့် Velo Magazine အရအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိုးဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်း, ဒါကြိုက်တယ်? ထို့အပြင်၎င်းသည်ဖုန်မှုန့်များနှင့်သင်၏မောင်းနှင်မှုသည်အနည်းငယ်ကြာရှည်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သငျသညျသမျှသောကြိတ်ခံစားမှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကောင်းပါပြီ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသည်ရာသီဥတုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်အတူကောင်းချီးမခံစားရပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်၎င်းကိုကြိုးစားရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မစတင်မီသင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ မင်းမှာcleanုံသန့်ရှင်းတဲ့ powertrain ရှိလိမ့်မယ်။ ဒီတော့မင်းရဲ့ကွင်းဆက်တွေ၊ ကွင်းဆက်တွေ၊ လေ့ကျင့်ရေးဘီးတွေနဲ့ကက်ဆက်တွေတပ်ထားတယ်။
အညစ်အကြေး၊ လက်ရှိချောဆီများမရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ သွားပြီသေချာအောင်လုပ်ပါ အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြချက်တွင်သင်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမသေချာလျှင်၎င်းကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုလည်းသင်လိုအပ်လိမ့်မည်ဆိုပါက link တစ်ခုပါရှိသည်။
ဒါက paraffin ဖယောင်းပါ။ ၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးများသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှပင်ရနိုင်သည်။ အချို့ကိုယူပါ။
ပိုသေးသောအပိုင်းအစများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအရည်ပျော်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်သေးငယ်သော granules အနည်းငယ်ရရှိရန်ကြိုးစားပါ။ သင်လည်းဒီတစ်ခုထဲလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ၎င်းသည်နှေးကွေးနေသောမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်မီးဖိုပေါ်သို့ပြုလုပ်ခြင်းထက်၎င်းသည် ပို၍ လုံခြုံသောကြောင့်၎င်းသည်ကျောက်အိုးတစ်လုံးဟုလည်းလူသိများသည်။
လက်အိတ်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမျက်မှန်များနှင့်အင်္ကျီချိတ်ကြိုးတို့ကိုလည်းယူပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ အချို့သောဟောင်းနွမ်းသောအဝတ်စများနှင့်အချို့သောသတင်းစာများကယိုဖိတ်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
တဖန်သင်တို့သွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ အိုကေ၊ မင်းအဲဒီထဲကတစ်ခုရှိတယ် ကောင်းပြီးသန့်ရှင်း။ ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ မည်သည့်အညစ်အကြေးမျှမရှိ၊ ကွင်းဆက်ကောင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဖယောင်းကသေချာစွာထိန်းထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ နှေးသောချက်ပြုတ်စက်ကိုအပူပေးပြီးသင် ၀ ယ်သည့်အရာပေါ် မူတည်၍ သင်၏ paraffin ဖယောင်းသို့မဟုတ်ဘားကိုရရှိရန်လိုအပ်သည်။
Po ယခုကွင်းဆက်တွင်သင်အလုံအလောက်လိုအပ်နေပြီးကွင်းဆက်ကိုယ်နှိုက်လည်းနစ်မြုပ်နိုင်သည်။ အရည်ပျော်ရန် ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်းသူမကိုမျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပါ ဦး ။
ဒီတစ်ခုမှာမလုပ်သင့်ပါဘူး သင်အရည်ပျော်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ဖယောင်းအစိုင်အခဲများမရှိစေရန် ၄ င်းကိုအနည်းငယ်ထစေနိုင်သည်။ သို့သော်အဖုမရှိဟုသင်သိသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်လည်းကူညီပေးသည်။
အခုဆိုရင်သင့်ဖယောင်းအရည်ပျော်သွားပြီဆိုရင်၊ ကွင်းဆက်ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုနှင့် roller တွေထဲကသေးငယ်တဲ့ပူဖောင်းတွေမထွက်လာခင်အထိကွင်းကိုတဖြည်းဖြည်းဖယောင်းထဲကိုဖြည်းချပြီးမိနစ် ၂၀ အထိထိုင်စေရပါမယ်။ ယခုတွင်သင်သည်ကွင်းဆက်ကိုချိတ်နှင့်ချိတ်ဆွဲထားပါ၊ သို့မဟုတ်ငါ့အိတ်၌အင်္ကျီချိတ်ကြိုးဟောင်းတစ်ချောင်းကိုချိတ်ဆွဲထားသည်။ နည်းနည်းပူနွေးတဲ့အတွက်အကာအကွယ်လက်အိတ်တစ်ချောင်းကိုဝတ်သင့်တယ်။
ယိုစီးရန်ကွင်းဆက်ဆွဲထားပါ။ ၎င်းသည်သင်၏နှေးကွေးနေသောချက်ပြုတ်သူ၏အတွင်း၌အပူရှိန်ပေါ် မူတည်၍ ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်၊ ၂၀ မိနစ်အကြားတွင်ကြာနိုင်သည်။ သို့သော်သတင်းကောင်းမှာကျွန်ုပ်၌အစောပိုင်းကပြင်ဆင်ခဲ့သောကွင်းဆက်တစ်ခုရှိသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။
ငါဘာလို့တစ်ခုရှိတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဖယောင်းပွက်ပွက်ဆူနေသောသံကြိုးကြားကြားထဲမှာ Sy Richardson က ၀ င်လာပြီးနောက်ထပ်ကွင်းဆက်တစ်ခုပေးပြီးသူကစမ်းကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါဆိုအခုသူတို့ထဲက ၂ ခုရပြီ။ ဒီတော့ဖယောင်းထဲမှာရှိနေပြီ။ ကြည့်ရအောင်၊ link တွေကတကယ်နည်းနည်းပဲ။ ဒီ roller တွေပေါ်မှာဖယောင်းကကောင်းတယ်။ ဒီတော့မင်းလုပ်ချင်တာကကွင်းဆက်ကိုနည်းနည်းကွေးပြီးဖယောင်းဖုတ်တာကိုလုပ်တာပါ။ ဒါကြောင့်ဒီဖယောင်း၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကနေရာတိုင်းကိုမသွားစေချင်ဘူး၊ မင်းရဲ့ drivetrain ကိုဖြည့်စေချင်တယ်။
ဒါ့အပြင်အဲဒါကိုအထည်နဲ့ယူပြီးကွင်းပြင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနိုင်တဲ့ပိုလျှံဖယောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ သင်သေချာအောင်လုပ်ချင်တာကတော့အဲဒါဟာကွင်းဆက်ရဲ့အတွင်းပိုင်း၊ တံသင်နဲ့စက်သီးတွေဖြစ်တယ်။ ဖယောင်းကအဲဒီမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီ
သတင်းကောင်းလား။ နောက်တစ်ခါမင်းရဲ့ကွင်းဆက်ကိုဖယောင်းလိုချင်တဲ့အချိန်မှာမင်းကအဲဒီဖယောင်းကိုပြန်သုံးနိုင်တယ်၊ ပိတ်ပါ။ ယခုငါသွားပြီးသူတို့ကိုကျွန်ုပ်၏စက်ဘီးနှင့်ရှိမုန်၏ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်ပြန်ထားလိုက်သည်။ ကံမကောင်းစွာငါသည်လည်းမိမိအလုပ်ဖို့ရှိသည်။
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးငါတို့တွေ့သမျှကိုမင်းတကယ်ပြောမယ်။ အိုကေဒါကြောင့်ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးထွက်သွားကြပြီ။ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကအဲဒါကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ မင်းအဲဒါဘယ်လိုထင်သလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ဂျွန်၊ မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားဟာကျွန်တော့်ကိုလည်ဆွဲတစ်ချောင်းယူပြီးကျွန်တော့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့လို့ပါ၊ အဲဒါကိုကျွန်မကြာမြင့်စွာကတည်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့တာ၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီ ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးအတွေးများ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရွှေချည်နှောင်များကိုမည်သို့စဉ်းစားရမည်ကိုအတိအကျမသိသော်လည်း၊
ဒါဟာတော်တော်လေးကျယ်လွန်းတယ်မဟုတ်လား ငါမျှော်လင့်ထားသည့်အရာတစ်ခုအတွက်အလွန်တိတ်ဆိတ်စွာနေပြီး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသန့်ရှင်းနေတုန်းပဲ။ ငါကအပေါ် 60k တယ်, ဒါပေမယ့်ဗြိတိန်၌ဤကျဆုံးခြင်း 60k တော်တော်ဖှယျဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မဆိုးဘူးဆိုတာသင်သိတယ်ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆူညံသံအချက်၊ တကယ်လို့ Eurobike ကသောကြာနေ့က CeramicSpeed ​​မှာအဆုံးသတ်လိုက်တာကတိတ်ဆိတ်တဲ့ကွင်းဆက်ဟာပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ကွင်းဆက်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မင်းဟာငါထက်အများကြီးပိုကုန်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ မင်းရာဂဏန်းအနည်းငယ် what ဘာကိုရခဲ့တာလဲ yeah, yeah, yeah, 200, 250k န်းကျင်။
၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးတုန်ခါမှုတစ်ခုတည်းသောအရာမှာဆူညံသံဖြစ်သည်။ စက်ဘီး, သို့သော်, ကွင်းဆက်, အတော်လေးအပြစ်ကင်းစင်သည်။ Drive, လုံးဝအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော, ဒါ
ဟုတ်တယ်။ သင်အချိန်ရှိသည်၊ သင်အမှန်တကယ်စက်ဘီး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမြင့်ဆုံးမြှင့်တင်လိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်ခံစားချက်ရှိသည်။ ဤသည်မှာကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်ဆိုးသောအခြေအနေများတွင် ၁၂ နာရီကြာခရီးစဉ်ကိုသွားတော့မည်ဆိုပါက၊ တန်သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက CeramicSpeed ​​ကမြန်တယ်လို့ပြောတာပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ဒီအခြို့သောအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်, ငါတိတ်ဆိတ်စက်ဘီးများအတွက် watts အနည်းငယ်ပူဇော်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဆူညံသံမရှိတဲ့စက်ဘီးတွေကိုပိုကြိုက်တာပဲ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီမှာ။
သူပြောခဲ့တယ် ကောင်းပြီခင်ဗျားကောကောမင်းတို့ထပ်လုပ် ဦး မလား။ ငါတကယ်လုပ်မယ်ထင်တယ်ငါပြန်လုပ်မယ်လို့ငါထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား? ဟုတ်တယ်။
ငါ့ကိုအချိန်တိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားချိတ်ဆက်မှုသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်မှုအသစ်တစ်ခုဝယ်ခြင်းမှတားဆီးတစ်ခုတည်းသောအရာ ဟုတ်တယ်။ ဒါကငါ့ကိုတကယ်တားဆီးတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တာဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာငါမသေချာဘူး၊ သူတို့ကဟောင်းနွမ်းနေပြီ၊ သင်ကဖယောင်းနဲ့ပြန်စီရမယ်၊ အသံကအသံပဲ။ မင်းဒါကိုပြန်လည်ကုဖို့လိုတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, အတော်လေးအော်ဟစ်။ အတော်လေးအော်သံ။ ကောင်းပြီနောက်တစ်နေ့တွင်သင်၏ပါဖင်ရေချိုးကိုအရည်ပျော်သွားသောအခါသင်သိသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပေးပါ။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပြproblemနာမရှိပါ။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုပ့်ပါမယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ Jon ရဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပါ။ တောင်းပန်ပါတယ်အချင်းလူ၊ မင်းငါ့ကိုစာရင်းသွင်းထားတယ်
ရပါတယ်။ အချို့ဆောင်းပါးများကိုတက်ပစ်ချပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်။
ကွင်းဆက်တစ်ခုဘယ်လိုပြန်ထည့်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ Si ကဒါပေါ့။ ဒီမှာနှိပ်ပါ ဟုတ်တယ်။
နောက်ထပ်တစ်ခုလား။ မင်းရဲ့ powertrain ကိုသန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အဲဒါဘာလဲ? Buddy ။
WD 40 ကွင်းဆက် lube သည်ကောင်းပါသလား။
၅ ကြယ်အနက်မှ ၅.၀ အကောင်းဆုံးစက်ဘီးကွင်းဆက် lube! ငါတော်တော်များများကြိုးစားခဲ့ပြီစက်ဘီးကွင်းဆက် lubes- ဤထုတ်ကုန်သည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ် tp လျှောက်ထားကွင်းဆက်ထို့နောက်ပိုလျှံပယ်စက္ကူမျက်နှာသုတ်ပဝါနှင့်အတူသုတ်။
WD-40 ကွင်းဆက် lube သည်ကောင်းပါသလား။
၅ ကြယ်အနက်မှ ၅.၀ အကောင်းဆုံးစက်ဘီးကွင်းဆက် lube! ငါတော်တော်များများကြိုးစားခဲ့ပြီစက်ဘီးကွင်းဆက် lubes- ဤထုတ်ကုန်သည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ် tp လျှောက်ထားကွင်းဆက်ထို့နောက်ပိုစက္ကူမျက်နှာသုတ်ပဝါနှင့်အတူသုတ်။
ငါစိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောကွင်းဆက် lube ကိုအသုံးပြုသင့်ပါသလား
အပူပိုင်း lubesခြောက်သွေ့တဲ့အခြေအနေနဲ့သန့်ရှင်းမှုအတွက်ပါချည်နှောင်။စိုစွတ်သော lubesဖြစ်နိုင်သည်အသုံးပြုခံ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးပိုမိုကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးကိုကမ်းလှမ်းပါ။ ဖြစ်စေ၊စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့, သင်ကသင်မည်မျှအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုမကြာခဏပါပဲထားအတွက်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သင်သေချာပါစေအသုံးပြုသည်ရန်ချောဆီမင်းရဲ့ကွင်းဆက်အဲဒါအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်18.09.2020
Chain Lube လိုအပ်ပါသလား?
ဝတ်ဆင်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်သင်၏သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်ကွင်းဆက်သူကမင်းလိုအပ်တယ်အဲဒါကိုချောဆီ။ ဒါဟာအကြားအဝတ်အစားကိုလျှော့ချပါတယ်ကွင်းဆက်နှင့်ကြယ်ပွင့်, လမ်းပိုင်းလျှော့ချခြင်းနှင့်ချေးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ကွင်းဆက် lubeကျိန်းသေပိုက်ဆံဖြုန်းတီးမဟုတ်ပါဘူး; ဒါကတကယ့်ဘဝကိုတိုးချဲ့နေတာပါကွင်းဆက်။
အဘယ်ကြောင့်အကျိုးရှိသနည်း။ ကဖယောင်းကွင်းဆက်သင်အစဉ်အမြဲစီးနင်းလိုက်ပါမည့်အသန့်ရှင်းဆုံး၊ အလွယ်ကူဆုံးနှင့်ဂရုပြုရမည့် drivetrain ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စက်ဘီးသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ထက်ဝက်ဖြင့်သန့်ရှင်းနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ကားမောင်းသူများယခုပိုမိုပြေးလွှားဆော့ကစားနေပြီးကျွန်ုပ်သည်အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ငွေစုဆောင်းနေပါတယ်။ ငါဆီဆီကိုဘယ်တော့မှပြန်မသွားတော့ဘူး
ဒီတော့WD-40နှစ်ခုလုံးပေးထားသည်ခြောက်သွေ့နှင့်စိုစွတ်သော lube။ ကော်လိုရာဒိုနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်များခဲ့သည်အပူပိုင်း Lube။